सबै भन्दा राम्रो संगीत स्मार्टफोन: एक अवलोकन, प्रकार, मोडेल, सुविधाहरू, र मालिकको समीक्षा
संगीत स्मार्टफोन - मुख्य उद्देश्य जो आफ्नो मालिकको आवाज गुणस्तर प्रदान गर्न एक मल्टिमिडिया ग्याजेट। उपकरण कस्तो यो खातामा विशेषज्ञहरु को राय लिएर, यो कार्य सामना गर्न सबै भन्दा राम्रो छ र समीक्षाएँ सरल मालिक बाहिर आंकडा प्रयास गर्नुहोस्।
एकदम केहि मान्छे गल्ती सबै भन्दा राम्रो संगीत स्मार्टफोन निर्मित वक्ता मा मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन् तर decibels अधिकतम सूचकांक किनभने यो धेरै भ्रामक छ - कि छैन मुख्य चयन कारक हो। छैन मात्रा प्ले को सर्व महत्व, तर आवाज गुणस्तर - शुद्धता, आवृत्ति र तीव्रता। यी सूचकहरू आधारित तल संकेत दर्जा संकलित थियो।
वास्तवमा, सम्पूर्ण सूची यस कठिन र अत्यधिक capricious मल्टिमिडिया क्षेत्र मा सफल व्यवस्थित गरेको ब्रान्डहरु प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले, यो प्रत्येक कम्पनी / निगम सबैभन्दा विशिष्ट मोडेल को सामान्य सूचीबाट छुट्टयाएर गर्न सकिन्छ। तर यो यस श्रृंखला मा ग्याजेटहरू बाँकी, बुरा विशेषताहरु छ कि छैन संगीत प्रेमीहरूलाई को ध्यान लायकका छन् मतलब छैन।
एप्पल देखि स्मार्टफोन
IPhone - यो शायद सबै भन्दा राम्रो संगीत स्मार्टफोन, मात्र "स्याउ" को एक प्रबल hater र विशेष "एन्ड्रोइड» -platform एक adherent हुन सक्छ कि प्रतिष्ठा र गुणस्तर प्रश्नमा छ।
पनि बजार मा आईफोनहरु को आगमन अघि कम्पनी धेरै विश्वास साबित र धेरै स्नायु प्रशंसक आधारित उपकरणहरू "एन्ड्रोइड" गरेका छन् जो iPads, चमक गर्न व्यवस्थित छ, किनभने यो छैन आवश्यक पहिलो स्थानमा छक्क।
आईफोन संगीत को समग्र तस्वीर देख, तपाईं लक्जरी स्टेरियो, prohibitive मात्रा वा बास आश्चर्यजनक देख्दैनन् - सबै राम्रो औसत देखिन्छ। यद्यपि, एक ध्वनि छ, अत्युक्ति बिना ग्याजेट, एकदमै रमाइलो र कुशलतापूर्वक देखि हालिएको छ। राम्रो समाचार प्याकेज पूर्ण ध्वनि मुख्य वक्ता को छाप पूरक कि धेरै उच्च गुणवत्ता हेडफोन समावेश भन्ने तथ्यलाई छ। यो तपाईं एउटा पोर्टेबल संगीत केन्द्रको रूपमा आफ्नो यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमति दिने, बाह्य स्पिकरहरू जडान गर्न सम्भव पनि छ।
प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया आधारित, संगीत प्रेमीहरूलाई लागि सबैभन्दा सफल मोडेल पाँचौ श्रृंखला भयो, तर छैटौं संस्करण को प्रशंसक निरन्तर यो वास्तवमा विवाद छ। तैपनि जो केवल धेरै हृदय जित्यो गर्न सकिन्छ सबै को लागि, राम्रो "रेटिना" -screens संग ग्याजेट एक अपेक्षाकृत ठूलो आन्तरिक मेमोरी र समर्थन, मात्र एउटा संगीत स्मार्टफोन रूपमा, तर पनि एउटा अत्यन्तै राम्रो-सन्तुलित उपकरणको रूपमा मूल्य र गुणस्तर को मामला मा।
यो लामो राम्रो गुणस्तर "Nokii" वा "माइक्रोसफ्ट" (तपाईं जस्तै) बाट विभिन्न स्मार्टफोन ध्वनि कि अवलोकन गरिएको छ। मनाउनु स्पष्ट ध्वनि लगभग सबै आवृत्ति बैंड संग, आफ्नो loudness, स्पष्टता, स्पष्टता र विस्तार खुसी छ, किनभने आधारहीन छैन।
सजिलै खेलाडी सबै सामान्यतः प्रयोग आवृत्ति मा विभिन्न गुणात्मक गतिशीलता प्रतिस्थापन गर्न परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ संगीत स्मार्टफोन Lumia 930. ग्याजेट सक्षम छ र कडा चट्टान गर्न शास्त्रीय देखि पनि सबैभन्दा venerable संरचना सामना गर्न सक्षम छ जो एक सार्वभौमिक embodiment, रूपमा।
यो पनि एक उत्कृष्ट प्रदर्शन, को महत ब्रान्ड देखि उच्च गुणवत्ता र फलदायी भराई एक धेरै राम्रो उपकरण लगभग सबै अवसरमा विशेष गरी विशेष सकारात्मक तरिकामा मोडेल को प्रयोगकर्ता समीक्षा रूपमा थप्न र प्राप्त गर्नुहोस्।
सोनी Xperia Z3
जापानी Z-श्रृंखला आफ्नो प्रशंसक को आवाज गुणस्तर खुसी छन्। ध्वनि पनि बाक्लो सुरक्षा झिल्ली छाडेनन्, र अघिल्लो दुई अवस्थामा जस्तै बाटो मा, उत्पादन ध्वनि, शुद्ध गहिरो र ठूलो पर्याप्त दिन।
"सोनी" बाट एक वैकल्पिक अडियो विकल्पहरू संगीत स्मार्टफोन थप सूक्ष्मता को तुल्यकारक अनुकूलन अनुमति एक निर्मित सफ्टवेयर संग सुसज्जित छ रूपमा। विभिन्न सेटिङहरूमा छिटो पहुँच लागि धेरै प्रोफाइल, ध्वनि आपूर्ति लागि जिम्मेवार प्रदान गरिन्छ।
तपाईं MDR-श्रृंखला जस्तै स्वामित्व हेडफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो निकै जो आफ्नो मनपर्ने संगीत संग टाढा सार्न बाहिर संसारबाट अनुमति दिन्छ को हल्ला कमी गुणक, बढ्छ।
आधुनिक म्याट्रिक्स, स्मार्ट भराई र "omnivorous" ग्राफिक्स चिप दृढ नमूना संग एक उत्कृष्ट स्क्रिन: को स्मार्टफोन एक धेरै राम्रो प्राविधिक विशेषताहरु छ।
एक किफायती संगीत बनाउने कम्पनी "लेनोभो" को रूपमा हालै ग्याजेट बजार नयाँ नवीनता सार्वजनिक क्षेत्र प्रदर्शन र विशेषताहरु लागि-लाइन शुरू।
संगीत स्मार्टफोन लेनोभो A319 - यो श्रृंखला को प्रमुख र शायद एक स्वामित्व कोडेक र पूर्णतया प्रमाणित Dolby डिजिटल प्लस संग सुसज्जित छ जो खण्ड, मा मात्र ग्याजेट छ। प्रणाली तपाईं बाहिर निस्कन क्रिस्टल स्पष्ट ध्वनि प्राप्त गर्न अनुमति दिने, डिजिटल अडियो कम्प्रेस द्वारा काम गर्दछ। र यदि तपाईं "Leonov" बाट स्वामित्व हेडफोन मार्फत संगीत सुन्न, यो सम्भव प्रयोगकर्ता कुनै पनि गीतको सर्वोत्तम ध्वनि हुन्छ भनेर, परिस्कृत बास प्रजनन हासिल छ। यो गतिशीलता र आवृत्ति को महत्वपूर्ण भाग छैन।
को Guvera संगीत बाट preinstalled सफ्टवेयर - ध्वनि उत्सुक संगीत प्रशंसकहरूको लागि काम गर्न थप उपकरण उपलब्ध छ जो एक सांगीतिक स्मार्टफोन, - को "लेनोभो" बाट A319 मोडेल। सेवा को भाग, अनलाइन काम गरिरहेको छ तिनीहरूलाई एकै समयमा तपाईं मेमोरी कार्ड मा स्थान सुरक्षित गर्न अनुमति दिने, आन्तरिक मेमोरी मा डाउनलोड बिना लाखौं गीतहरूको असीमित पहुँच दिने।
"लेनोभो" को एक-श्रृंखला को ग्याजेट - एक सांगीतिक स्मार्टफोन, एक उच्च गुणस्तरीय4इन्च प्रदर्शन संग सुसज्जित सम्पर्क दुई अंक र राम्रो तरिकाले मंच प्रदर्शन KitKat 4.4। "एन्ड्रोइड" को आधारमा। ग्याजेट5मेगापिक्सेलको एउटा धेरै राम्रो क्यामेरा र यस्तो "स्काइप", खेल, सामाजिक सञ्जाल र अन्य उपयोगी सफ्टवेयर को एक सेट रूपमा पूर्व-सेट कार्यक्रम को एक ठोस प्याकेज संग सुसज्जित छ।
"लेनोभो" को नयाँ लाइन संगीत प्रेमीहरूलाई द्वारा सराहना गर्न निश्चित छ। कम्पनी धेरै आकर्षक मूल्य, एक ग्याजेट, उच्च गुणस्तरीय संगीत खेलाडी र एक उच्च-भरने मा संयोजन गर्न व्यवस्थित छ। उपकरणहरू एक-लाइन यसको खण्ड मा 2015 को लागि बिक्री नेताहरूले छन्। र यो ब्रान्ड चुनिएको र यो मोडेल गलत हुन सक्दैन गरेका हजारौं।
जीपीएस-ट्रयाकर मिनी A8: समीक्षा, विनिर्देशों, निर्देशन
दुनिया मा coolest फोन। प्रिय वा कार्यात्मक - चयन गर्न के?
फोन "फिलिप्स MANDURA 180": समीक्षा
स्मार्टफोन एसस Zenfone सी ZC451CG: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों
IOS9अद्यावधिक: समीक्षा, मुद्दाहरू निर्देशन
पियरे CARDIN, जूता: समीक्षा, निर्माण को देश
खुशी र परम आनन्द को संसारमा प्रवेश गर्न - टापुहरूमा मा विवाह!
छोराछोरीलाई अंग्रेजी पढ्न कसरी सिकाउनुहुन्छ?
र कसरी के नङ पालिस ढाक्न?
सपना व्याख्या। किन धर को सपना
Mayk Mayers (माइक मायर्स): एक अभिनेता फोटो को Filmography
घर मा फिड सुनगाभा?
Chiraz क्लब3* (टुनिशिया / Monastir) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
मेहनत उसिनेर अन्डा कसरी खाना पकाउनु। पकाउने सुझाव, व्यञ्जनहरु
काठ लागि Nageli: प्रकार, लाभ र प्रयोगको सुविधाहरू